ပြည်သူ့အစိုးရနှင့် ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံကြသူများတွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပပြုလုပ် – PVTV Myanmar
·2months ago ·31 Comments
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ မတရားတဲ့ လုပ်ရပ်တွေအပေါ် ထောက်ခံ အားပေးလိုခြင်းမရှိပဲ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံလာကြတဲ့ တပ်မတော်သားနဲ့ ရပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ လုံခြုံရေး၊ စားဝတ်နေရေးနဲ့ ဘဝအာမခံချက်ရှိစေရေးတို့ကို ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ဖို့နဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ အသိပညာ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးအတွက် ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရေးတို့အတွက် “ပြည်သူရင်ခွင်ခိုလှုံရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်မှု ကော်မတီ”ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်ပြီး ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ မှာတော့ အဲဒီ့ကော်မတီရဲ့ စီစဉ်မှုနဲ့ “ပြည်သူ့အစိုးရနှင့် ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံ ကြသူများတွေ့ဆုံပွဲ” တစ်ခု ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ့ပွဲကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့အတူ ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးတွေနဲ့ ကော်မတီဝင်တွေ၊ CDM ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ၊ People’s Embrace ပြည်သူ့ရင်ခွင်အဖွဲ့၊ People’s Soldier ပြည်သူ့စစ်သားအဖွဲ့တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့က ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံခဲ့ကြတဲ့ တပ်မတော်သားနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အချို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ယာယီသမ္မတက တိုင်းပြည်ချစ်စစ်သားတွေကို ပြည်သူတွေ အခုလို အမုန်းကြီးစေရန် လုပ်ခဲ့တဲ့ အဓိက တရားခံဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် အာဏာရှင်တွေ၊ အာဏာသိမ်း မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ အပေါင်းအပါ စစ်အုပ်စုတွေဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပြည်သူနဲ့အတူ ရပ်တည်လာခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူ့စစ်သားတွေနဲ့ ပြည်သူ့ရဲတွေကို အထူးလေးစား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူ့ရင်ခွင့်ခိုလှုံလာသူတွေကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ လက်တွဲ ကာ အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ပြည်သူ့ရင်ခွင်အစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူ့ အာဏာကို ပြန်လည်ရယူပြီး ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ သွေးမြေကျမှု အနည်းဆုံးဖြင့် စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ် ကြောင်း၊ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ရဲတွေ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံ လာသူ များလေလေ သွေးထွက်သံယိုမှုနည်းပြီး ပြည်တွင်းစစ်ကို တိုတောင်းစေ မှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူများမျော်မှန်းတောင့်တတဲ့ လွတ်လပ်ပြီး ကြောက်ရွံ့မှုကင်းသည့် လူ့အဖွဲ့ အစည်းတရပ်ကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မူငါးချက်အနေနဲ့ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံလာတဲ့ ရဲ နှင့် တပ်မတော်သားတွေကို ပြည်သူ့သားကောင်းတွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ နဂိုရာထူးတွေအတိုင်း လုပ်သက်၊ ရာထူး ၊ပင်စင်တွေကို အစိုးရအနေနဲ့ အာမခံပေးခြင်း၊ ဘဝရပ်တည်နိုင်မှုအတွက် ကူညီစောင့်ရှောက်မယ့် စီမံကိန်းများ ချမှတ်ခြင်း၊ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံမယ့် တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ နဲ့ PDFတွေ မတိုက်ခိုက်ရန် ကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ မကြာမီအချိန်ကာလမှာ ဖွဲ့စည်းမယ့် ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်မှာ အရေးကြီးသည့်အခန်းကဏ္ဏတွင် နေရာပေးရေးတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းပြီး အကြောက်တရားကင်းသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် ထူထောင်နိုင်ဖို့ အာဏာရူးတွေရဲ့ အဓိကထောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ရဲတွေ ပြည်သူ့ရင်ခွင်သို့ အလုံးအရင်းခိုလှုံလာဖို့ အခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုတွေကို သည်းခံ ကျော်လွှားပြီး ဆက်လက်လက်တွဲဆောင်ရွက်ပေး ကြဖို့ အထူးတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံကြောင်းတို့ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်က ဒီလို ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံလာသူတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ထိခိုက်နစ်နာမှု အနည်းဆုံးနဲ့ အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက် အင်မတန်ကို အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်တာကြောင့် အခက်အခဲတွေကြားထဲက အခုလို ပြည်သူ့မျက်နှာကြည့်ပြီး ပြည်သူ့ဘက်ကို ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ တချို့တွေ ပြည်သူ့ဘက်ကို ကူးပြောင်းလာချင်ပေမယ့် ပြောင်းလာဖို့ အခက်အခဲတွေပို ဖြစ်နေတယ်လို့ ကြားသိရကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း ပြည်သူ့ရင်ခွင် ခိုလှုံရေးအစီအစဉ်ကို အင်မတန်ကြောက်ရွံ့ပြီး ဖျက်လိုဖျက်စီးလုပ်နေတာတွေလည်း ရှိနေလို့ ပိုမို သတိကြီးကြီးထားပြီး ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်သားတွေ ရဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာ အပြည့်အ၀ ပေါင်းစပ်ကူညီ ပေးနိုင်ဖို့ အမှန်တကယ်လိုလားတာကြောင့် အခုဆိုရင် ပြည်သူ့ဘက်တော်သား တပ်/ရဲ CDM တို့ရဲ့ပညာ၊ အတွေ့အကြုံတို့ကို ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်စေဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Task Force5ဆိုပြီး လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခု ထပ်မံဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ဒီတော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အားတွေ စုပေါင်းပြီး အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာ ဖြစ်လို့ မိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အားလုံးပူးပေါင်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းတွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေက အမှာစကားအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာကြတဲ့ တပ်မတော်သားနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက လိုအပ်ချက်တွေကို တင်ပြခြင်း၊ အကြံပြုချက်များပေးခြင်း၊ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သော နည်းလမ်းတွေကို ဆွေးနွေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံလာကြသော တပ်မတော်သားနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့က ချိတ်ဆက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပြီး ရှေ့ဆက်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စတွေကိုလဲ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
Khin Hnaung says:
2021-11-29 at 4:13 PM
2021-11-29 at 4:15 PM
2021-11-29 at 4:18 PM
ကျမ္မာ ဘေးကင်းကြပါစေ 🙏🙏🙏
Mankyi King Mya says:
Chery July says:
2021-11-29 at 4:34 PM
2021-11-29 at 4:42 PM
NUG,CRPH ဝန္ႀကီး အားလုံး ႀကိဳးစား အားထုပ္မႉ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ရင္ခြင္ ဝင္လာေသာ ျပည္သူ႔ရဲ ျပည္သူ႔တပ္သား အားလုံး ျပည္သူနဲ႔အတူ ေဘးကင္းလုံျခဳံ က်န္းမာၾကပါေစ။
2021-11-29 at 4:44 PM
မြန်မာပြည်ကိုတိုင်ပြည်သစ်တွက်တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ နေကောင်းကျန်းမာ အသက်ရှည်ကြပါစေ ပြည်သူဆန္ဒအမြန်ဆုံးဖြည့်စည်းနိုင်ကြစေ
2021-11-29 at 4:58 PM
2021-11-29 at 5:05 PM
2021-11-29 at 5:09 PM
စခနဲ့ရခတွေ အမြန်လူစိတ်ပေါက် အသိတရားအမြန်ရ၍ပြည်သူ့ဘက်သို့ပြောင်းလာကြပါစေ
A Linn Yaung says:
ဝင္တာကဝင္လို႔ရတယ္ အယံုၾကည္ေတာ့မရွိဘူး သပ္သပ္ခဲြထား အေရးေတာ္ပံုမေအာင္မခ်င္း သူတို႔ကို ဘယ္မွဝင္မပါခိုင္းနဲ႔ သတင္းေတြမေပါက္ၾကားေစနဲ႔ ဥာဏ္သတိဝရိယရွိပါ NUG
2021-11-29 at 5:15 PM
စရဖ တွေကို CDMဆိုပြီးထည့်ထားတာတို့
ကျန်းမာ​ဘေးကင်းကြပါ​စေ နိုင်ငံ​တော်ကို အာဏာရူး အာဏာရှင် စနစ်က​နေ လွတ်​မြောက်​အောင် ​ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ​စေ 🙏
Kyaw Yamin says:
2021-11-29 at 5:26 PM
2021-11-29 at 5:34 PM
NUG ,CRP ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အား လေးစားယုံကြည် အားကိုး အားထားလျှက်ပါရှင့်၊သက်ရှည်ကျန်းမာကြပါစေရှင့်
May Naing says:
2021-11-29 at 5:37 PM
Yee Yee Win says:
2021-11-29 at 5:55 PM
2021-11-29 at 6:04 PM
တော်လှန်ရေးကြီးဟာတစ်ရက်နောက်ကျတိုင်းပြည်သူတွေအသက်စတေးနေရပါတယ် စကစ က လူပါးပိုဝလာပါတယ်.သူတို့အတွက်အချိန်တွေပိုရလာပါတယ်..အမြန်ဆုံးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်..
2021-11-29 at 6:25 PM
အာဏာရွင္ စနစ္ က် ဆုံး ေရး
ပူးေပါင္း ပါဝင္ သူ
အားလုံး ေက်း ဇူး
2021-11-29 at 6:42 PM
NUG. CRPH. နိုင်ငံဂေါင်းဆောင်များနှင့်တကွာ အဖွဲ့တော်သားအားလုံး ဘေးရန်အပေါင်းမှကင်းဝေးပီး နေကောင်းကျမ္မာစွာဖြင့် ကျန်စည်သမျှတခုမကျန်အောင်မြင်ဏာစေ 🙏🙏🙏
2021-11-29 at 6:48 PM
2021-11-29 at 6:51 PM
2021-11-29 at 7:08 PM
2021-11-29 at 7:56 PM
ဒိုး လုံး says:
2021-11-29 at 8:50 PM
2021-11-29 at 10:14 PM
ဝရမ်းပြေးတေ သေခါနီးမှာ အရိုးတွန်နေတာ သောက်အလကား မင်းတို့တော်လှန်ရေးဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးကွ
Mgmin Lay says:
2021-11-29 at 10:49 PM
အားလုံး ကျန်းမာ သက်ရှည်ပြီးဘေးကင်းကျပါစေ